श्रीमान भारतमा छन्, पहिरोले श्रीमती दुई छोरा र १० महिनाकी छोरीको लियो ज्या न | Public 24Khabar
Home News श्रीमान भारतमा छन्, पहिरोले श्रीमती दुई छोरा र १० महिनाकी छोरीको लियो...
श्रीमान भारतमा छन्, पहिरोले श्रीमती दुई छोरा र १० महिनाकी छोरीको लियो ज्या न
काठमाडौं । गुल्मीको रूरूक्षेत्र गाउँपालिका ५ मा शुक्रवार आएको पहिरोले घर पुरिदा एकै परिवारका चार जनाको निधन भएको छ। पहिरोले घर पुरिँदा रूरूक्षेत्र ५ बम्घा आटीपाटाकी ३० वर्षीया बिना माझी (बोटे), उनका छोराहरु ९ वर्षीय सागर, ७ वर्षीय हेमन्त र १० महिनाकी छोरी बिनिताको घटनास्थलमै निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ।
बिनाका पति राजु माझी (बोटे) भने रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा छन्। उद्धारका प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ प्रस्थान गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ।
यो अर्को समाचार डिशहोमले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकका पहिरो प्रभावितलाई राहत वितरण गरेको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाह्रबिसे नगरपालिका वडा न‌ं ५ जम्बुमा पहिरो प्रभावितलाई डिशहोमले राहत वितरण गरेको हो। पहिरो पीडित २८ घर परिवारलाई ४ लाख २० हजार रुपैयाँ रकम राहत स्वरुप उपलव्ध गराईएको छ।
डिशहोमका स्थानीय वितरक र प्रतिनिधी पहिरोबाट अति प्रभावित जम्बु पुगेर पीडित परिवारलाई सहयोग रकम उपलब्ध गराएका हुन्। सामाजिक उत्तरदायित्वलाई मनन गर्दै डिशहोमले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै विभिन्न सामाजिक कार्यमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ। एसईई तयारी कक्षादेखि लकडाउनको समयमा विद्यार्थीहरुको पढाईमा सहयोग हुने कक्षा ४ देखि १० सम्मको पाठ्यक्रम टेलिभिजन कक्षा मार्फत प्रशारण गरिरहेको छ।
नेपालको एक मात्र डीटीएच सेवा प्रदायक डिशहोमले ग्राहकलाई निरन्तर उत्कृष्ट सेवा र गुणस्तरीय दृष्यसँगै सामाजिक उत्तरदायित्वका कामहरुलाई समेत तिब्र रुपमा अगाडि बढाइरहेको छ।-taja khabar
काठमाण्डौ – कोभिड-१९ को संक्रमण पुनःबढ्दै गएपछि सरकारले आवतजावतमा कडाइ र आवश्यक परेमा लकडाउन सम्मको तयारी गरेको छ। कोभिड-१८ संकट व्यवस्थापन केन्द्र(सिसिएमसी) निर्देशक समितिले काठमाडौं आउने सवारी साधनहरूको कडाइ गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
पछिल्लो समय कोभिड-१९ का बिरामी बढ्दै गएको र परिस्थिति काबुबाहिर गए लकडाउन गर्न सकिने स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले बताए। ‘हालसम्म लकडाउनको तयारी छैन तर परिस्थिति भड्कियो भने जुनसुकै बेला हुनसक्छ,’स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले भने,’पहिला हामीले खुकुलो गर्दा पनि पछि प्रतिकूल अवस्था भयो भने यो भन्दा कडा लकडाउनको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ भनेर भनेकै छौं।’
वीरगञ्ज लगायतका ठाउँहरूको घटनाले संवेदनशील बनाइरहेको समेत उनले बताए। ‘आवतजावत र क्वारेन्टिनको मामिलामा एउटा अनुशासन नअपनाउने हो भने अलि गाह्रो होला कि जस्तो भइरहेको छ,’उनले भने,’परिस्थिति यसरी नै बढ्दै गयो भने नियन्त्रणका लागि लकडाउन पनि एउटा उपाय हो तर त्यो मात्रै त भएन। अरु उपाय पनि अवलम्बन गर्छौं। सँगै यसलाई पनि अलि व्यवस्थित गर्नुपर्छ। अहिलसम्म ठीकै छ।’ उनले वीरगंजमा अलि परिस्थिति भड्केला कि जस्तो भएको र पोजेटिभहरूको संख्या पनि धेरै भएकाले अस्पतालको खोजी भइरहेको समेत बताए।
उनले चिकित्सकहरूको एउटा टोली पठाएको र त्यहाँको परिस्थितिबारे छलफल भइरहेको जनाए । शुक्रबारमात्रै १० हजार ७ सय ८६ को पिसिआर परीक्षण गरिएको भन्दै मन्त्री ढकालले सरकारले अन्य तयारी पनि गरिरहेको दाबी गरे। उद्योग वाणिज्य तथा आपर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले परिस्थिति अनुसार ठाउँ विशेषमा सिल गर्न सकिने बताए।
‘उपत्यकामा विशेषगरी कोभिड-१९ का बिरामी बढ्नेजस्तो संकेत देखिएको छ। त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने समुदायमा फैलिन नदिन के गर्ने भन्ने सिसिएमसीमा पनि छलफल भएको थियो। पर्सिको मन्त्रिपरिषदमा पनि छलफल होला,’उनले भने,’पिसिआरको मात्रा पनि बढाइएको छ। संक्रमणका आधारमा कुनै एरिया सिलबन्दी गर्न सकिन्छ।’ सिसिएमसीले अहिले नै लकडाउन गर्ने बेला नभएको भन्दै मानिसको आवतजावतमा भने कडाइ गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।’बाहिरबाट मान्छेहरू ल्याउन खोज्ने र आउने पनि आउन खोज्ने प्रवृत्ति बढी देखिएको छ,’सिसिएमसीका सचिव महेन्द्र गुरागाईंले सेतोपाटीसँग भने,’यातायातमा अलि कडाइ हुन्छ होला। निजी गाडीमा मान्छे ओसार्ने काम भइरहेको छ। यसलाई समेत अब कडाइ गर्नुपर्छ।’
सचिव गुरागाईंका अनुसार संक्रमणको जोखिम भएका ठाउँहरूबाट अत्यावश्यक भएमामात्रै काठमाडौं आउन दिइनेछ भने सामान्य ठाउँबाट आउनेहरूले पनि व्यक्तिगत पास लिएर आउनुपर्नेछ। ‘अति जरुरी भएर नआई नहुनेलाई प्रशासनले हेरेर मात्रै गर्ने भन्ने भएको छ,’एसएमएस'(स्यानिटाइजर,मास्क र सोसल डिस्टेन्स)को प्रयोगलाई पालना गरेमा लकडाउन गर्न पर्दैन भन्ने छ,’उनले भने,’अत्यावश्यक काम नपरी घरबाट निनस्किने र भीडभाडमा नजानका लागि जनता आफैं सचेत बनुन् भन्ने सरकारको चाहना हो।’ बाहिरबाट आउन कडाइ गर्ने र काठमाडौंमा परीक्षणलाई बढाउने हो भने पूर्ण रूपमा बन्द गर्न जरूरी नरहेको समेत सिसिएमसीको ठहर छ।
(यो समाचार सेतोपाटिमा सन्जिब बगाले लेखेका छन् )
Previous article१७ साउन, बुटवल । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को संक्रमण पुष्टि भएका दुई जना सम्पर्कविहीन बनेका छन् । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा कोरोना पुष्टि भएको जानकारी पाएलगत्तै उनीहरु सम्पर्कविहीन भएका हुन् । शुल्क तिरेर गरिने परीक्षणका लागि उनीहरुले शुक्रबार स्वाब दिएका थिए । पोजेटिभ रिपोर्ट आएको जानकारी पाएलगत्तै उनीहरु सम्पर्क बाहिर गएको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र गिरीले बताए । उनीहरुले आˆनो ठेगाना बुटवल वडा नं. ६ र सम्पर्क नम्बर एनसेलको मोबाइल नम्बर टिपाएका थिए । नतिजा पोजेटिभ आएको भन्ने पहिलो कल रिसिभ गरेका उनीहरुसँग त्यसपछि सम्पर्क नहुने नसकेको डा. गिरीले बताए । स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनलाई खोजीका लागि अनुरोध गरिएको उनले बताए । प्रयोगशाला प्रमुख डा.गिरीका अनुसार उनीहरुले भारतबाट आएको र पुनः भारत जानका लागि पीसीआर परीक्षण गराउन आएको बताएका थिए ।
Next articleदु:खद खबर : नेपालमा एकै दिन, एकै अस्पतालमा दुइजना कोरोना संक्रतिमको नि’ धन